Namuhla ezihlukahlukene ikhabethe zabesifazane siyamangalisa. Inani elikhulu bobunjwa esiyingqayizivele nezitayela kuhlangene amathoni egqamile futhi umnene futhi kokuqhathanisa kanye lokubhalela yasekuqaleni kwenza intombazane yesimanje nje ebukekayo. Abaklami sisebenza ngokuzikhandla ukuze udale izithombe ezintsha, bese udonsela oluvela zokwaluka esidlule. Ngakho banquma ukuba ujike amehlo ethu ukuba nengxenye enhle lwesintu uyathandwa in the 50s and 70s kwekhulu elidlule elingenamikhono-umfece. Photo, iphethini kwalo mkhiqizo, kanye inqubo lokuthunga ezocatshangelwa kulesi sihloko.
Amandla thunga noma obumbene ubelokhu intengo njalo. Hhayi zonke owesifazane ithalenta a skein ngentambo noma izicubu usike ukudala into eyingqayizivele eziyokwenzeka yayo wezigqoko. Kodwa uma kukhona ngisho nekhono kancane nokuzimisela ukuthuthukisa kubo, kungcono nje emangalisayo.
Umqondo thunga noma tie elingenamikhono-umfece ngezandla - kungcono indlela enhle yokuqala umsebenzi. Le ngubo uyobheka ephelele kunoma iyiphi design. Lokhu kungaba esibophezelayo eziyinhloko ntambo obukhulu noma, Ngakolunye uhlangothi, openwork ukwelukwa; elingenamikhono kwi zokwenziwa ukupheda inketho satin-ngaphakathi noma ukushisa namakhaza. Kulokhu, zonke ezandleni amakhosi, futhi umcabango wakhe kuphela inquma isitayela ukusebenza.
Kukhethwa izindwangu for amajazi
Lapho abathungela yimuphi umkhiqizo kubaluleke kakhulu ukukhetha Indwangu kwesokudla. Ngokwemvelo, kulesi simo-ke kudingekile ukukhetha ukuthi ulondoloza izinto ezifanele. Lokhu kungaba soft cashmere, Tweed noma izindwangu Polar noma ezimaholoholo efana boucle noma bazisonga ngalezi. Ukubukeka lendwangu incike aluka. Kungaba satin, twill, nelineni noma inhlanganisela.
Ukuze ebusika, ukhetho best yayiyobizwa tolstosukonnye emidwebweni ukuthi kungenziwa kabili uphahlwe ukwahlukanisa noma wenze podstezhki. Ukuze Demi ongakhetha ukulingana ne esihle cashmere ulwelwesi. Kodwa ngempela ijazi mncane kungcono ukukhetha gabardine noma diagonal.
Ekukhetheni izincwadi ezidingekayo ukucabangela lokho kuyoba iphethini elingenamikhono-umfece. Indwangu ilineni aluka, okungase chasiselwe ngezinto ezinamandla ngobuningi, ekahle onobuhle cap imikhono. Kumele kukhunjulwe ukuthi into kungaba ezingezwakali. Ungathathi model ezinjalo kuba indwangu ethambile kakhulu, ngoba elingenamikhono iwukugcina ukuma. Libuye efiselekayo ukusebenzisa eqinile ngilulekela izicubu ukuthi kungenziwa zikhubazekile e inqubo amasokisi.
Nge ukukhetha ntambo kulula zonke kakhulu. Kukhona Ukubusa owodwa kuphela: intambo kumele ukujiya okwanele. Ukwakheka kuleli cala, kunendima ethile ekugcineni yesibili. Nokho, lokho kuvimbela ukuba ulinge? Iphethini-umfece amajazi, okuyinto esetshenziswa knitwear, liyefana yini omunye kuso umkhiqizo lokuthunga. Ngo ukunitha izingxenye ezibalulekile kuphela ukugcina olinganise isifanekiso bese uphinda amajika. Ngakho-ke, lapho sikhetha ntambo kufanele bacabangele ukushuba lendwangu lengubo esizayo. Uma ntambo emaningi kakhulu, kuyodingeka ukuba landise inani lawo iphethini azungezwe, uma esihle - encishisiwe.
Ideal for efudumele amajazi wathungela kukhona lokuluhlaza ezifana bouclé, uvolo, lulwimi uvolo, mohair. Kodwa-ke, akucacile yini ukuthi kukhanselwe ucwaningo, kodwa ngoba ungazama ukudala isimanga ukuthi ntambo obumbene ubuhlalu, sequins futhi lurex. Yebo, lo mkhiqizo ngeke kulungele futhi kunalokho akubukeki njenge elingenamikhono, ibhantshi smart, kodwa ehlobo noma entwasahlobo kusihlwa kulungile. Ngokwemvelo, iphethini elingenamikhono-umfece kule ukusebenza akufanele kube izibonelelo inkulu kakhulu khulula kufanelekile ngokwezifiso.
Izilinganiso - isisekelo sokuthethelelwa
Umkhiqizo Isifanekiso - kuyisisekelo iyiphi into, kungakhathaliseki ukuthi imboni noma ukukhiqizwa ngabanye. ukuhleleka kanjani? Coat-umfece ngezandla zabo ukwenza ngokuphazima kweso. Okokuqala udinga ukuthatha izilinganiso zakho nge izibalo, bese kuzenze iphepha efanele. Uma kukhona izinkinga kanye umklamo, ungaya komunye yezindlela ezilula.
Njengoba indlela elula ukwenza iphetheni? Coat-umfece has a emikhonweni eyodwa isiqeshana. Futhi le ndlela ephelele seamstresses imfundamakhwela. Yakha workpiece ilula. Into yokuqala ukuthatha izilinganiso yakho: ivolumu entanyeni, esifubeni kanye hip, ububanzi ehlombe, emikhonweni ubude obuphelele umkhiqizo, ukuphakama esifubeni nobude okhalweni ngaphambili. Ungakwazi ngisho nokwenza ngethephu test esihlakaleni nengalo yonkana entanyeni yakhe ukudambisa inqubo wokwakha.
Isifanekiso kangcono obukhulu ukwakhiwa ifilimu, lapho ungakwazi ukudweba obungangenhloko kakhanjana ipeni evamile. Kulula ukugcina, it is hhayi ziklebhukile, ngayinyomfoza ngayiphosa, ngokungafani kuya ephepheni. Ngakho, kanjani iphethini? Coat-umfece wadala ngezandla zabo kulula.
Izingxenye phambi izindwangu ezingemuva basuke kucishe, umehluko kuphela ku womphimbo ukujula, nalokhu akwenze phambi kufanele libe halves ezimbili, futhi unayo izibonelelo sokubhalisa fasteners. Umdwebo kusekelwe eyakhelwe kusuka engela ezimbili iqonde kwesokudla, lapho ubude mpo ilingana umkhiqizo, kanye ovundlile ilingana kwesigamu entanyeni girth + ehlombe ububanzi emikhonweni obuphelele. Okulandelayo ubambe imigqa asizayo: webele umugqa okuyinto sokudonsa phezulu engela mpo ngokuvumelana ithephu "esifubeni ukuphakama" okhalweni umugqa-to-ngesilinganiso "obuphelele phambi forehand okhalweni" futhi hip umugqa (ngezansi okhalweni 20 cm).
Ngaphezu kwalokho kungenzeka ukuqala ukwakhiwa emkhonweni. Endaweni lapho obuphelele nesilinganiso ehlombe uphela, sokuhamba kusukela emgceni locondzile ama-4 cm, walala umugqa omusha, inkontilaki kaNgcobo ngokuhambisana ithephu "emikhonweni obuphelele". Ngemva engela kwesokudla onqenqemeni umugqa inikezwe kumelwe wehlele 10-15 cm kuye ububanzi wayefisa emikhonweni kanye ukushuba we esihlakaleni. Lokhu kulandelwa umugqa ukuxhuma esifubeni imikhono phansi umugqa ngokwenza ijika endaweni ikhwapha. Ngemva kwalokhu ziyonquma ukuthi kufanele olugcwele phansi umkhiqizo, futhi ukuqhubeka hose umugqa osuvele ukhona ngokusebenzisa umugqa side umphetho phansi okhalweni. Konke sekulungele iphethini. Coat-umfece ne cap sleeves ngomumo. It uhlala ukuze ungeze imininingwane, futhi usukulungele thunga.
izici eziningana ezinjengolwazi fastener emaphaketheni, imicibisholo, ezivuzayo, collar futhi cuffs - imininingwane zazo okhethwe main isibonelo sekulingisa. Ngaphandle kwawo, umkhiqizo kungaba yisicefe futhi okuyisidina. Ngalezi izakhi, ungalungisa nangezindlela bese udala isithombe esiphelele. Iphethini elingenamikhono-umfece ngokwayo kungokwasekuqaleni kunjalo, ngezinye izikhathi Minimalism unika izinto ikhubalo ekhethekile. Nokho, fastener, emikhonweni obuphelele, futhi isango elilodwa emaphaketheni uzizamele kungenzeka. Ukumodela elingenamikhono-umfece - ke ingenye izigaba ezithakazelisayo kakhulu, njengoba uma usebenzisa ithempulethi elula uguqulwe ube into eyingqayizivele.
Ukuphuca kanye ukuhlangana
Uma isifanekiso abakulungiselweyo kusukela ifilimu, ungakwazi ulithumele lendwangu uqale ahlabayo. Kufanele kukhunjulwe mayelana nesabelo umphetho of mayelana 1-1.5 cm, kuye ngohlobo lendwangu. Udinga ukuba kanye entanyeni ngaphambili kwesigaba at ibanga cishe 5-7 cm ukubamba parallel umugqa emaphethelweni iphethini - ngeke podborty imikhiqizo, bona ukuphuma ngokuhlukile ijwabu ecashile efanayo umphetho imali yokusizwa njengoba kule kwezinye izingxenye.
Ukubuthanela izakhi eziyinhloko sejazi akuyona inkinga enkulu, kodwa nge emaphaketheni babe abanye enkingeni. Uma ekuhlanganiseni nhlobo isipiliyoni, kungcono ukwenza emaphaketheni ku ezivuzayo ohlangothini. Okuqukethwe kumele kube kufika ku inhlangano yabantwana bakwa zonke izingxenye elingenamikhono. Lapho amalungiselelo ephelele emaphaketheni, usukulungele thunga. Okokuqala ugaye izinto ezinkulu ehlombe, uthunge odlula ku sleeves. Ngemva ezivuzayo ehlombe ithungwe kumininingwane podbortov bese uxhuma lesi sici main blade elingenamikhono.
Nge Knits lula kakhulu. Yekuchumana enqubeni ukunitha kuyalungiswa ubukhulu iphethini, futhi uma bakulungele, bamane sutured. Uma izinhlelo - umkhiqizo ngaphakathi, bese kudingeka ukuba vyvyazat podborty extra elihambisana iphethini. Nge emaphaketheni kufanele enze okufanayo njengoba lapho abathungela. Omunye imininingwane okumele wathungela, kanye nezinye - ukuncishiselwa kusuka abami Indwangu.
Ukuze beka ephaketheni, kudingeka usike izingcezu ezimbili iphethini zizungezwé ngesandla esihlakaleni kuya kalula ka lendwangu main kanye ulwelwesi. ulwelwesi Landelayo ithungwe kuya umphetho ohlangothini ngesikhathi okhalweni kuya phambi isigamu elingenamikhono futhi preform we izindwangu elingenamikhono ukuze - labaqaphi elingemuva. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi emnyango ulwelwesi ephaketheni ukuze angabonwa. Ngemva kwalokho, imininingwane sejazi kuhlanganiswe ngesikhathi umphetho ohlangothini futhi zixhunywe umugqa oqondile. emaphaketheni neengcezu nazo ezigugile phansi abaphundlwe yensimbi.
Wathungela elingenamikhono-umfece nge emaphaketheni ku ezivuzayo kwenziwa isimiso esifanayo.
Ukuze ulwelwesi, kuzomele uqale uthole imininingwane ku izifanekiso ukuvunwa. Kufanele kuqashelwe ukuthi iphethini ungabi podbortov. Iphinde kufanele kubhekwe umphetho izibonelelo cishe 1 cm. Isebenza ne padded kancane. Okokuqala, ukuvala ehlombe emikhonweni ezivuzayo, ngemva kokuthuthela ohlangothini. Okulandelayo ulwelwesi pritachivayut ukuze podbortu. Isinyathelo sokugcina - umphetho pritachivaniya umkhiqizo nezingxenye futhi imikhono Esekelwa oyinhloko izindwangu.
Ukwazi indlela thunga ijazi-umfece iphethini okuyinto kuboniswe kulesi sihloko, ungagcina imali efanele imali, ngoba le nto manje lo mkhuba, futhi isitolo ke kuyodingeka bakhokhe eziningi.
Autumn isihlahla ngezandla zakhe indlela yokwenza?
Ukwenza insipho ngezandla ekhaya. Homemade insipho: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Dala blouses ehlobo ngezandla
Cabanga indlela yokunakekela imbali, "injabulo zabesifazane" ngendlela efanele
"Camp Nou" -stadion - iparele Barcelona
Iminyaka engakanani ongayilahla ukungabi nacala kwakho: ingxoxo
Umgomo esheshayo - ungubani, hero
Elkar izilinganiso kuwusizo abadala kanye nezingane